Courses – NAY LIN AUNG
QNE (Computerised Accounting System Training)
Computerised Accounting System များသင်ကြားမှုနှင့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Value Growth Consulting Ltd. ၏ Founder & CEO ဖြစ်သူဆရာ ဦးသိန်းလွင်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး NLA FAA မှသင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဆရာဆရာမတွေက မလေးရှားနိုင်ငံ အခြေစိုက် QNE Software Sdn. Bhd. ကရေးသားထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အသေးစားလုပ်ငန်းတွေကနေ လုပ်ငန်းကြီးတွေအထိတွင်ကျယစွာအောင်မြင်စွာ အသုံးပြုနေတဲ့ QNE Business Solutions Software ကိုအသုံးပြုပြီး Case Study ဖြင့် စာတွေ့လက်တွေ့ ပေါင်းစပ်သင်ကြားပေးမယ့် Computerised Accounting Training သင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်လိုသူများအတွက် အကျိုးရှိမယ့် သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
တက်ရောက်သင်ကြားလိုသူများ 16.05.2020 (Sat) နေ့မှ စတင်ပြီး ကျောင်းအပ်နိုင်ပါပြီ။
(QNE – SOFTWARE) Computerised Accounting Training
? Fees (70,000/- Ks)
? Timetable / 1-Section (25)ဦးလက်ခံပါသည်။